Filtrer les éléments par date : vendredi, 22 décembre 2017
vendredi, 22 décembre 2017 14:21
Fetin'ny Noely sy faran'ny Taona
Efa miomana tanteraka amin’ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona tokoa ny vahoaka Malagasy amin’izao fotoana izao.
Ny ankizy moa no tena ahazo vahana raha ny eny Analakely no ho resahina, satria dia tapitra hita eny avokoa ireo karazana kilalao maro samihafa. Na izany aza dia misy ihany koa ny bazary izay ho an’ny sarababem-bahoaka.
Toy ny isan-taona dia tsy latsa-danja amin’izany ny sakafo, toy ny akoho amam-borona sy izay efa hanomanana sahady ny fety.
vendredi, 22 décembre 2017 13:05
Tsenan'ny akoho amam-borona: Mitobaka ny entana fa tsy misy mpividy
Andro vitsivitsy mialohan'ny tsenan'ny Noely sy ny faran'ny taona, mirantina manerana ireo tsena eto Mahajanga ny akoho amam-borona saingy “tsy misy mpividy” hoy ireo mpivarotra fa manontany no betsaka.
Zara raha mahalafo gana na akoho iray isan'andro, manomboka maraina mandrapaharivan'ny andro ireo mpivarotra, raha ny fanazavana hatrany. Tsy nahitam-piakarana anefa ny vidin'ireo akoho amam-borona ireo raha mitaha tamin'ny taon-dasa fa ny olona mihitsy no tsy manam-bola.
Torak'izany koa ireo karazana haingon-trano isaky ny Noely. Tsy mazoto manaingo trano ny ankamaroan'ny tokatrano fa ny ahitana izay hohanina no vaindohan-draharaha.
vendredi, 22 décembre 2017 11:00
Akademia Malagasy: Hommage au président Zafy Albert
Notanterahana tetsy amin’ny Akademia Malagasy Tsimbazaza ny fahatsiarovana manokana ary fampatsiahivana an’i Tompokolahy Zafy Albert.
Nisy araka izany ny fampahafantarana ny mombamomba an’ity filoham-pirenena teo aloha ity sy ireo niara-dia taminy teo amin’ny asa, indrindra ny mahakasika ny fitsaboana.
Nisy ny valandresaka natao ho an’ny olona rehetra izay nanatrika teny.
Ity fahatsiarovana manokana sy fanomezam-boninahitra ity moa dia notarin’ny filohan’ny Akademia Malagasy Raymond RANJEVA, notronin'ireo mpikambana ao amin'ny Akademia, nanolona ireo fianakaviana, namana, olo-tsotra ary mpiara-miasa tamin'i Filoha Zafy Albert.
CRINFP Morondava: Mpiadina 635 hifaninana amin’ny toerana 50
Hotanterahina anio zoma 22 desambra 2017 ny fifaninana handraisana mpampiofana ho mpampianatra ao amin’ny CRINFP (Centre Régional de l'Institut National de Formation Pédagogique). 50 no horaisina ho an’ny eto Morondava, miisa 635 ireo kandida hiatrika io fanadinana io.
vendredi, 22 décembre 2017 10:42
Morondava: Mitety tanàna ny delestazy
Miaina fahatapatahan-jiro ny eto an-drenivohitry ny faritra Menabe. Eo anelanelan’ny amin’ny 6ora hariva ka hatramin’ny 9ora alina izany, ary mifandimby tapaka ny Fokontany eto Morondava.
Miverina indray ny fahatapahana eo anelanelan’ny amin’ny 4ora ka hatramin’ny 6ora maraina.
Fahasimbana gropy mpihary herinaratra ao amin’ny Jirama no voalaza fa antony.
vendredi, 22 décembre 2017 10:37
Morondava: Nahatsiaro ireo mpiasan’ny SOPEMO
Nanolotra vary 10 gony ho an’ireo mpiasa miisa 150 tao amin’ny orinasa SOPEMO (Société de Pecherie de Morondava) ireo mpitondra teto Morondava. Natolotra tamin’ny anaran’ny BNGRC na Birao nasionaly misahana ny loza voajanahary izany omaly alakamisy 21 desambra.
May kila hotohoton’ny afo nandritra ny haintrano nitranga ny 11 desambra ny SOPEMO, hany orinasa lehibe tokana sisa nijoro teto Morondava.
vendredi, 22 décembre 2017 10:24
Fianarantsoa: Orana nandripaka nandritra ny telopolo minitra
Nanampoka ny mponina teto Fianarantsoa ny orambe nisy tafiotra sy havandra omalyalakamisy tolakandro teo. Nisy ny faharavana naterak'izany, toa ny fiendahan'ny tafon'ny toerana fikarakarana fiara teo amin'ny « voirie ».
Olona telo no naratra nienjeran'ny andrin'io trano io. Nahazo ny tsena manodidina teo Anjoma ireo fahasimbana ireo.
Nahenoana voina toa ny fahatapahan'ny hazo izay nanembatsembana fifamoivoizana teny Ivory. Niharan'izany ny ivontoerana fanofanana pasitera teo amin'ny SALT (Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia), izay nahitana fahasimbana trano maromaro. Nisy fahasimbana ihany koa teo amin'ny lisea Raherivelo Ramamonjy.
Tamin'ny dimy ora hariva omaly nanangonana ny vaovao dia iray monja ny antso voaray teo amin'ny mpamonjy voina.
vendredi, 22 décembre 2017 10:19
Raharaha Manapatanana: Nangina tanteraka
Hatreto aloha dia jerem-potsiny ny raharaha Manapatanana izay mbola resabe eto Mahajanga hatramin’izao. Volana vitsivitsy lasa izay no nanao fanambarana ny avy ao amin’ny ministeran’ny fanajariana ny tany sy ny Kaominina Mahajanga fa tsy manana taratasy fahazoan-dalana hanao fanorenana sy fanotofana ny tany amina hektara maro eny Manapatanana ny teratany karana iray izay mitonona ho tompon’ny tany.
Nandritra izany fanambarana izany dia nilaza ny avy amin’ny ministera sy ny Ben’ny Tanànan’i Mahajanga Andriantomanga Mokhtar Salim fa tsy maintsy hiroso amin’ny fandrodanana raha tsy voalamina ao anatin’ny iray volana ny raharaha.
vendredi, 22 décembre 2017 10:02
Oniversite Fianarantsoa: Mikantona hatramin'ny 4 janoary 2018
Namarana ny taona tamin'ny alalan'ny fety lehibe ny fianakaviamben'ny oniversiten'i Fianarantsoa ny alarobia 20 desambra. Fantratra tao anatin'izany ny fandrisika manonkana nomena an'ireo mpampianatra amin'ny alalan'ny fanolorana azy ireo ampahantany mitovy velarana mba afahan'izy ireo manamboatra trano eny Andrainjato.
Nisy ny jeritodika an'ireo zavabita nandritra ny taona fa indrindra ny fanamarihana ny faha 40 taonan'ny oniversite.
Teo ihany koa ireo vina fanatsarana izay miandalana amin'ny taona ho avy. Mikantona manomboka ny 21 desambra ny onivesite mandritra ny fotoam-pialatsasatry ny faran'ny taona. Miandry raharaha kosa ireo tandrify izany andraikitra izany isaky ny ny sampan-draharaha.